Daawo sawirrada: Sida uu u dhacay kulan dhexmaray madaxweyne Xasan & dhigiisa Masar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo sawirrada: Sida uu u dhacay kulan dhexmaray madaxweyne Xasan & dhigiisa Masar
A warsame 30 December 2014 30 December 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Qaahira kula kulmay madaxweynaha Masar Gen. C/fataax Alsisi.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Masar ayaa ka hor kulanka salaan sharaf ka qaatay ciidamada qalabka sida ee Masar.
Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya, Da’uud Aweys ayaa sheegay in madaxweyne Xassan Sheekh uu u gudbiyay dhigiisa in dhinacyo badan laga garab siiyo Soomaaliya si labada dal ay hore ugu sii wadaan Soomaaliyada cusub iyo Masarta cusub.
Dhinaca kale madaxweynaha dalka Masar C/fataax Siisii ayaa ballan qaaday inuu dhisayo gudi ka shaqeeya horumarinta xiriirka Masar iyo Soomaaliya isagoo dhanka kalena xusay inay Soomaaliya ka taageerayaan arrimaha tababarka ciidamada iyo dhinacyo kale.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay isla Qaahira kula kulmay Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Dr. Nabiil Alcarabi.
Alshabaab: Mid ka mid ah ragii weeraray Xalane wuxuu ahaa Kenyan
Qeybdiid: Rag shaqo doon ah ayaa isu soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Gobolada Dhexe